संसद विघटन र नेकपा एकता बदर सम्बन्धी फैसलाको साइनो छैन : विपिन अधिकारी – Nepal Press
संसद विघटन र नेकपा एकता बदर सम्बन्धी फैसलाको साइनो छैन : विपिन अधिकारी
२०७८ जेठ १४ गते २०:२१
काठमाडौं । संविधानविद् विपिन अधिकारीले संवैधानिक इजलासमा कुन न्यायाधीश रहने र को नरहने भन्ने कुरा झगडीया वकिलले प्रश्न उठाउन नपाइने टिप्पणी गरेका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा नेकपा एकता बदर सम्बन्धी फागुन २३ को फैसला गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ रहन नैतिक रुपमा नमिल्ने भनी गोविन्द बन्दी लगायतका विपक्षी वकिलले विरोध जनाएका छन् ।
अधिकारीले भने न्यायाधीशको निष्ठामा प्रधान न्यायाधीश र न्यापरिषद्ले बाहेक वकीलले इजलासमा प्रश्न उठाउन नपाइने बताए । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन र नेकपा एकता बदर सम्बन्धी फैसलाको कुनै सम्बन्ध नरहेको समेत दावी गरे ।
अधिकारीको विचार उनकै शब्दमा :
हामीले न्यायाधीशहरुको निष्ठामा अनावश्यक रुपमा प्रश्न गर्नु जरुरी छैन् । यो खुला इजलास भनेको एउटा प्रणाली हो र न्यायिक निर्णय गर्ने जुन तरतारिका हुन्छन्, त्यो पारदर्शीतामा आधारित हुन्छ । वकिलहरुले बसह गर्दै छन्, कानुनको उल्लेख गर्नुपर्छ । निवेदकपक्षसँगै प्रत्यर्थी उभिएको हुन्छ । बाहिरबाट ‘एमआईकस’ मागिएको हुन्छ । लाखौं मान्छेले हेरिरहेको हुन्छ । एउटा मान्छे आफैमा केही पनि होइन ।
पहिलो सुनुवाईमा पनि मैले त्यसमा टिप्पणी गरिनँ र अदालतको पतिरक्षा गरेँ । त्यसको ‘आउटकम’ मेरा लागि संविधानसम्मत थियो । र यसमा पनि म त्यही भन्छु । यदि हामी न्यायाधीश छान्दै हिँड्यौं भने न्यायाधीशको निर्वाचन गनुपर्ने दिन आउँछ ।
जो न्यायाधीश छन्, ती न्यायाधीशहरुले न्याय सम्पादन गर्न सक्दछन् भन्ने विश्वासमा अडेको हुन्छ हाम्रो सबै प्रणाली । यदि कुनै काम कारवाहीमा कैफियत निस्कियो भने संसद छ हामीसँग । इजलासमा वकिलले न्यायाधीशको निष्ठामाथि प्रश्न उठाउने होइन । त्यो त प्रधानन्यायाधीश वा न्यायपरिषद्ले उठाउने कुरा हो । झगडियाले न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउने भनेपछि राम्रो हुँदैन् ।
र, अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको र नेकपा एकता बदर गर्ने मुद्दाबीच कुनै साइनो छैन् । ती दुईटै स्वतन्त्र रुपमा आएका थिए र दुईटैमा अदालतले उचित फैसला गरेको मान्दछु ।
प्रकाशित: २०७८ जेठ १४ गते २०:२१
One thought on “संसद विघटन र नेकपा एकता बदर सम्बन्धी फैसलाको साइनो छैन : विपिन अधिकारी”
I salute Dr Bipin. We all should work together for the system. Our system drects us to trust our Hon’ble Justices and Judiciary. We all should learn to trust the system. Of course reformation matters continuously but it also let to go through the process itself.
F. S. Nariman, rightly said that, “God Save The Hon’ble Supreme Court”.